Smile Eagle EA - Best Forex EA | | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
HomeFree Forex EAsEzigbo Umu EA EA
Smile Eagle EA Free bụ mbipute n'efu nke Forex Expert Advisor nke otu aha. N'adịghị ka nsụgharị zuru ezu, ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe nza nza na ọnụọgụ ego nke uru na-egbochi na Onye ndụmọdụ Ndụmọdụ. A kachasị mma maka ahia: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, USDJPY, EURAUD, EURCHF. Oge ntinye aro bụ M15.
Ezigbo Umu EA EA anaghị azụ ahịa na abụọ ejiri mgbasa ya karie isi 20. Anwalela EA na “Open ọnụahịa naanị” mode. Ebe ọ bụ na ndị na-ere ahịa setịpụrụ nnukwu uru mgbasa maka ngwụsị izu, setịpụ mgbasa nke ugbu a na isi 2-5 mgbe ị na-anwale EA. Ọ dị mkpa ịtọ uru pụrụ iche nke njirimara Ime Anwansi nke iwu EA maka otu ọ bụla. Mgbe ị na-anwale EA ma zụọ ahịa na ndị na-ere ahịa iji mezuo iwu nke ahịa, setịpụrụ MarketWatch = ezi.
The ọkachamara Advisor enwere ike iji ya na ụzọ ọ bụla nwere mgbasa dị ala.
Smile Eagle EA Free - Atụmatụ
Nkwụnye ego kachasị elu bụ $ 100, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ego abụọ ọ gụnyere.
Njikere ịga na-enweghị ntọala ọ bụla.
Oge ahia: 24 awa n'ụbọchị.
Kwado ụdị ụdị ọ bụla.
Na-arụ ọrụ na ndị ahịa niile.
A na-atụ aro akaụntụ ECN.
Smile Eagle EA Free - Uru
Anaghi eji Martingale.
Agaghị ahapụ ahịa.
Ọ dị mfe iji, ọ dịghị ihe ngwugwu.
Smile Eagle EA Free - Parameters
Trade - ntọala azụmahịa;
Magic - NJ pụrụ iche nke iwu EA. Ọ dị mkpa ịtọ otu uru maka otu ụzọ ọ bụla.
Slippage - ndaba na pips. Kpụrụ ndị akwadoro bụ 0 ka 3.
StopLoss - Kwụsị uru efu na pips. Ọ bụrụ na 0 - gbakọọ ma setịpụ ya site na EA;
TakeProfit - Were uru uru na pips. Ọ bụrụ na 0 - gbakọọ ma setịpụ ya site na EA;
MarketWatch - setịpụrụ eziokwu maka ndị na - ere ahịa na - egbu egbu nke ahịa.
Egwuregwu Smile Free
Ike Ịkwụ Ụgwọ EA Nyocha